Maalinta: Abriil 12, 2020
Shirkadda Mareykanka ee Lockheed Martin Avionics Tech ayaa heshiis la saxiixday Ciidanka Cirka ee Mareykanka oo ku saabsan casriyeynta diyaaradaha Duulimaadka U-2. Lockheed Martin, alaab-qeybiyaha koowaad ee Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagon, [More ...]
Marka la eego baaxadda cudurka Corona ee dillaacay, bandowga 48-saac ayaa laga hirgaliyay 30 magaalo oo waaweyn iyo Zonguldak. Isla markii mamnuucida la bilaabay, warka ciqaabta ee ku saabsan ku xadgudubka bandoowga ayaa ka yimid qaybo badan oo dalka ah. [More ...]
Natiijooyinka Tijaabada ah ee Tirada 91 Bukaan-socod Wadareed oo laga soo daadgureeyay Koonfurta Kuuriya mar labaad Fiican
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Kuuriyada Koofureed, Jeong Eun-Kyeong, ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay Jimcihi in cudurka uu dib ugu soo laabtay bukaannada qaba Coronavirus (KOVID-91) oo soo kabsaday oo laga saaray 19. Eun-Kyoung, [More ...]
Wadamada saddexaad oo Art sida dhaqsaha badan ee Case Virus Turkey
Coronavirus (Kovid-19) si ay u raacaan mid ka mid ah goobta firfircoon xogta Worldometers.info sida ay xogta, Turkey kordhay ee ugu dhaqsiyaha badan Kovid-19 kiisaska booska uu ka dal saddexaad. Turkey, ayaa ku tilmaamay in France kula tirada 5,138 kiis ku tilmaamay maanta [More ...]
Meelaynta Nidaamka Tareenka iyo Laamiyadaheena Qaranka
Laga soo bilaabo 1856 ilaa 1923, tareenka kilomitir ee xNUMX ayaa laga dhaxlay xilligii Osman. Intii lagu jiray xilligii Jamhuuriyada, maal-gashiga tareenada ayaa la xoojiyey, qiyaastii 4.136 km waxaa la dhisay tareen. Wadarta 3.000 ilaa 1950 [More ...]
Caawinta Magaalooyinka Ganacsatada Ka Shaqeysa Qeybta Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Bursa
Marka loo eego cabirrada 'Covid 19', boqolkiiba inta adeegsada gaadiidka dadweynaha magaalada Bursa sababao kala duwan awgood sida gaadiidka dadweynaha, kala badh awoodda, bandowyada ka weyn 65 iyo wixii ka yar 20 sano. [More ...]
Xukunka Istanbul wuxuu qaadayaa talaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo fogaanta bulshada ee Gaadiidka Dadweynaha
Maamulka Magaalada Istanbul ayaa ku dhawaaqay tilaabooyinka iyo go'aanada la xiriira ilaalinta masaafada bulshada ee gaadiidka dadweynaha, laga bilaabo 13:2020 Isniinta, 05.00 Abriil XNUMX. Bayaanka uu soo saaray Maamulka Magaalada Istanbul ayaa lagu yiri: [More ...]
Wuxuu aasaasay xarunta wicitaanka ee IETT 2010 si loo siiyo adeeg dhakhso leh oo hufan Istanbulites. Waxaa la asaasay 2010, İETT Call Center waxay siisaa muwaaddiniin wanaagsan nambarka 444 1871. Tirada xarunta wicitaanka [More ...]
Mashruuca Casriyeynta Gawaarida Algeria
1970 gawaadhi loo yaqaan 'diel loolotives' oo ay soo saarto shirkadda General Electric 12-yadii ayaa la casriyeyn doonaa. Marka la eego baaxadda mashruucan casriyeynta, awoodda gawaarida leh 1800 matoorada xoogga qaada ayaa la labanlaabi doonaa. Marka loo eego macluumaadka aan helnay [More ...]
Lambarka Taleefanka Tareenka ee Adana
Diyaaradaha Bambardier Kanada ee ku saleysan diyaarado ganacsi oo kala jaad jaad ah, gawaarida gaadiidka dadweynaha iyo tareeno xawaare sare leh. Qeybta duulista ee shirkadu waxay ku yaalley xarunta duulista hawada ee Bombardier ee Montreal; Waaxda gaadiidka dadweynaha Bombardier [More ...]
Maanta, taariikhdu markay ahayd 12 Abriil 1869 go aankii Van der Elst. Kharashaadkii waa la bixiyay. 12-ka Abriil 2018 Khadadka Sincan-Kayaş ee magaalada (Başkenray) waxaa lagu furay xaflad ay ka soo qeyb galeen Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. 12-Abriil [More ...]